रबर घन्टी Swimtrainer पौडिरहेका लागि - यो संसारमा सबै भन्दा राम्रो रबर घन्टी छ। यो उत्पादन किन्न - एक जवान बच्चा सहयोग गर्न एउटा राम्रो तरिका पानी को डर छैन र यात्रा समयमा आफ्नो कार्यहरू समन्वय शिक्षित।
Inflatable सर्कल Swimtrainer। उपस्थिति को इतिहास, रंग र ढाँचाको मतभेद
विकासकर्ता सर्कल SWIMTRAINER गोदभराई, जारी तीन मोडेल - हामी खातामा छोराछोरीको शरीर को peculiarities लिन। कान्छो (वृद्ध तीन महिना) को लागि र बच्चाहरु (तीन वर्ष) को लागि र पहिले नै आफ्नै पौडी खेल्न सिक्न तयार भएका उमेर पाँच वर्ष देखि बच्चाहरु को लागि। यी मोडेल रंग र आकार मा भिन्नता छ।
डिजाइन रबर घन्टी रूपमा
सर्कल Swimtrainer थियो जर्मनी मा अधिक पन्ध्र वर्ष पहिले आविष्कार। जर्मन कम्पनी FREDS पौडी खेल्न एकेडेमी GmbH पौडी खेल्न छोराछोरीलाई सिकाउन लागि विशेष विद्यालय खोलेको छ। स्वामित्व प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्कल पौडी Swimtrainer क्लासिक को आधार मा विकसित गरिएको छ। उत्पादन लामो समय को लागि परीक्षण गर्दै छन्, र कम्पनीको व्यवस्थापन थप, यो उपभोक्ताहरु को एक विस्तृत श्रृंखला को लागि बजार मा तिनीहरूलाई जारी गर्ने निर्णय भएको थियो। चाँडै Swimtrainer मोडेल मात्र होइन जर्मनी तर पनि पूर्वी युरोप को धेरै देशहरूमा लोकप्रियता प्राप्त गरेका छन्।
2011 मा, मोडेल दायरा सुधार गरिएको छ। पांडित्य जर्मन विकासकर्ताहरूले सानो विवरण गर्न डिजाइन बाहिर लाग्यो। किनभने, बच्चाको सुरक्षा मा, हरेक सानो कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
inflatable मोडेल को दायरा संरचना
Inflatable सर्कल Swimtrainer क्लासिक - खुला आकार। तिनीहरूलाई प्रयोग सजिलो र सुविधाजनक कुनै पनि शरीर को बच्चाहरु छ। असामान्य यो उत्पादन र बच्चाहरु एक reclining स्थिति हो भन्ने तथ्यलाई, अगाडी ढल्केको। लगभग एक अनुभवी swimmers रूपमा। पाँच स्वतन्त्र हावा Chambers यस दायरा, तिनीहरूले संख्यात्मक छन् र प्रत्येक अलग देखावटी। Airbags पानी मा पौडीबाज एक स्थिर स्थिति प्रदान गर्नुहोस्। सर्कल पनि रंग द्वारा प्रतिष्ठित छन्। पानी-विकर्षक क्यामेरा रातो, सुन्तला वा पहेंलो र क्यामेरा harnesses, बच्चा सधैं सेतो मा चिन्ह लगाएका छन्, गिर गर्न दिन छैन। सर्कल विभिन्न रंग उमेर सीमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। उत्पादन पोलीविनायल क्लोराइड देखि बनेको छ। यो सामाग्री सूर्य मा बाल्न र इच्छित बल र स्थायित्व छ छैन। पाँच स्वतन्त्र हावा Chambers पानी मा पौडीबाज एक स्थिर स्थिति प्रदान गर्नुहोस्। सेतो सुरक्षा inflatable बेल्ट आन्दोलन रोक्न बिना स्थिति फिक्स।
बेल्ट तल्लो भाग बच्चा समर्थन, आमाबाबुको हातमा रहेको जस्तै प्राप्त गर्ने यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ। निःशुल्क र सहज फिट खुट्टा को आन्दोलन प्रतिबन्ध छैन। नरम नायलन पट्टियाँ सुरक्षित पछाडि fastened। को पट्टियाँ बच्चालाई समातेर छन्, ताकि गल्ति (वा जानीबुझी) पानी घूंट तिनी सफल छैन। अचानक सर्कल बाहिर पर्ची पनि कारण सुरक्षा बांधनेवाला सिस्टम गर्न असम्भव छ। पेटेंट ताला सिस्टम शीर्ष बंद एक ढक्कन छ। आवरण सक्रिय गति संग unbuttoned लक मौका अनुमति छैन। को पट्टियाँ आकार मा समायोज्य छन्।
रंग र ढाँचाको मतभेद रंग र आकार भिन्न
सीमा मोडेल रातो। रातो एउटा खतरा संकेत हुन चिनिएको छ। उहाँले सधैं ध्यान आकर्षित गर्छ। र यो यस्तो रङ विकासकर्ताहरूले धेरै युवा र अनुभवहीन लागि डिजाइन गरिएको छ जो मोडेल, चित्रित गरेका छन् छ। साथै, निर्माता पनि बच्चाहरु उज्ज्वल रंग प्रेम लाग्यो। त्यसैले, पानी गतिविधिहरु बच्चा Swimtrainer छ भने, रमाइलो हुनुपर्छ।
क्लासिक रातो सर्कल अझै हिंड्न र, सबै बच्चाहरु vzbrykivanie खुट्टा एक मनपर्ने प्रयोग गरेर पानी मा आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्न सिक्दै कसरी चिन्ने सक्छ बच्चाहरु लागि हो। राम्ररी सोचेको-बाहिर उत्पादन डिजाइन Swimtrainer तिनीहरूलाई safest बनाउँछ। युवा swimmers कुनै पनि या त लहर वा आकस्मिक टिप प्राप्त हुनेछ।
आमाबाबुले गहिराई मा छोराछोरीलाई सँगसँगै पौडी खेल्न सक्छन् र बच्चा प्रति वा पार्श्व लहर हुनेछ भनेर नडराऊ। रातो मोडेल airbag सबै भन्दा ठूलो चौडाइ आयाम छ। यो पानी सतह मा उत्पादन र unsinkable stabilizes। सर्कल Swimtrainer रातो, कारण यसको चौडाइ, एक सानो plovtsa.Takim तरिका, बच्चाहरु मुक्त र बलियो खुट्टा को हात को आन्दोलनहरु सीमित र उनको औंलाहरु हल्कासित पानी सतह को हात छोएर सार्न सक्छ। आधारभूत गतिविधिहरु प्रदर्शन, बच्चाहरु एक सर्कल मा पानी सतह मा सार्न र यसको स्थान परिवर्तन गर्न सिक्न। सुरक्षित महसुस, पौडी खेल्न प्रेम गर्ने बच्चाहरु अधिकतम आनन्द प्राप्त गर्नेछ। र आमाबाबुले छोराछोरीलाई को मात्र शिक्षकहरू पौडी खेल्न, तर पनि आफ्नो बच्चाहरु संग समूह गतिविधिहरु आनंद हुन प्रसन्न हुनेछ। बच्चा पछि पानी खडा र आफ्नो खुट्टा पकड पर्याप्त प्रशिक्षण लागि। बच्चालाई बर्खास्त र कोच हातमा देखि बन्द धक्का हुनेछ। र यी आन्दोलनहरु सम्झना हुनेछ। र त्यसपछि, कोच अगाडि भेट्नुपर्छ हुनेछ जब, बच्चा, शुरू, एक कोच वा अभिभावक गर्न पौडी खेल्न गर्छन हुनेछ। उज्ज्वल रंग सर्कल, असामान्य आकार र harnesses बेल्ट अरूको ध्यान आकर्षण गर्न र समुद्र तट, तट वा पूल गर्न बच्चालाई सबै पर्यटकहरू ध्यान केन्द्र गर्नेछ। रातो रंग को एक सर्कल को व्यास - चालीस दुई सेन्टिमिटर।
सुन्तला सर्कल उपकरण पुरानो उमेर समूहको लागि निमित्त संकेत गर्छ। यो मोडेल कसरी खुट्टा को पानी सतह मा निर्माण गर्न र पानी यसको स्थान निगरानी गर्न सक्छन् पहिले नै चिन्नेहरू बच्चाहरु को लागि डिजाइन गरिएको छ। सर्कल सुन्तला रंग को आकार रातो भन्दा सानो छ। यो बच्चाहरु हात आन्दोलनहरु जडान, पानी सतह मा निर्माण गर्न मौका दिनुहुन्छ। पानी मा रहन र सही दिशा मा सेल गर्न - यी आन्दोलनहरु थप सक्रिय सार्न बच्चालाई प्रोत्साहन गर्छौं। को सुन्तला सर्कलमा बच्चाहरु पहिले नै मुक्त raking छन् र एक समन्वित र आफ्नो हतियार र खुट्टा सार्दा पौडी खेल्न सिक्न। निस्सन्देह, बच्चा पछिको आफ्नो सल्लाह र व्यावहारिक उदाहरण pomogat छिटो पाठ सिक्न गर्ने वयस्क हुनुपर्छ। को सुन्तला सर्कल को व्यास - तीस-नौ सेन्टिमिटर।
सर्कल Swimtrainer पहेंलो
पहेलो सर्कल ती swimmers पहिले नै ठूलो पानी मा सार्दा राम्रो भएका लागि हो, तर डर कि, वा असुरक्षित सर्कल बिना लाग्छ। यसलाई स्वतन्त्र नेभिगेसन गर्न संक्रमण सजिलो, चिल्लो र सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ। पहेंलो मोडेल एक सर्कल द्वारा पौडी गर्न प्रशिक्षण अन्तिम चरण सकिन्छ।
सबै मोडेल को नजिककालागि - पहेंलो, यो बस बच्चा afloat सही स्थिति, सुरक्षा सेतो बेल्ट संयोजनमा समर्थन गर्दछ। तपाईं Swimtrainer पौडिरहेका लागि पहेलो सर्कल तुलना गर्न सक्छन् संग एक lifejacket। सुरक्षा को डिग्री र पानी मा बच्चा को मुक्ति आन्दोलनहरु र। पहेंलो सर्कल Swimtrainer त afloat रहन आफूलाई मदत, बच्चा सक्रिय आफ्नो हतियार र खुट्टा सार्न एक उत्प्रेरणा थियो भनेर, धेरै फुल्नु गर्न सक्दैन।
पानी मा सुरक्षित रहन
सुरक्षाको बोल्ने, म आधारभूत आवश्यकता भन्न चाहनुहुन्छ: सर्कल मा बच्चा गहिरो पानी मा स्थित हुनुपर्छ, त्यसैले उसले आफ्नो खुट्टा तल देखि बन्द धक्का गर्न सक्षम थियो। अन्यथा overturning एक जोखिम छ। र, को पाठ्यक्रम, एक वयस्क सधैं बच्चा नजिकै हुन र थप पाखुराको लम्बाइमा एक दूरी मा दृष्टि को क्षेत्र मा उहाँलाई राख्नुपर्छ।
सर्कल पौडी Swimtrainer एक रंगीन गत्ता बक्स मा बेचे। एक सर्कल संग एक बक्स पाँच भन्दा बढी कुनै सय ग्राम वजन।
पनि रूसी र सबै युरोपेली भाषामा एक उज्ज्वल अलग विस्तृत निर्देशनहरू संलग्न छ। प्रयोग र सही सर्कल सुरक्षित प्रयोगमा उनको लिखित सल्लाह मा। जो बच्चाको सिक्ने कसरी पौडी खेल्न देखाउन निर्देशन उज्ज्वल fotobuklety संलग्न, साथ।
सबै Swimtrainer लागि गुणस्तर उत्पादनहरु को उत्कृष्ट दायरा बाबजुद खरीद संग एक छ महिना ग्यारेन्टी जारी।
विशेष बच्चाहरु को लागि पछि Swimtrainer
सार्न विकलांग बच्चाहरु गर्न, साथै विशेष आवश्यकता बच्चाहरु Swimtrainer सर्कल प्रयोग aquatherapy मदत रूपमा। पानी एरोविक्स सबैका लागि उपयोगी छ। र Swimtrainer सीमित दायरा मानिसहरूलाई खुलेर सार्न र खुट्टा र हातहरू को मांसपेशिहरु तालिम मदत। आखिर, पानी मा, कुनै पनि शारीरिक गतिविधि सामान्य वातावरण भन्दा गाह्रो देखिन्छ। राउन्ड Swimtrainer मा एक मुद्रा समर्थन धेरै राम्रो। सँगै संग trainers छन् विशेष बच्चाहरु आफ्नो हात र खुट्टा आफ्नो आन्दोलनहरु समन्वय गर्न, मांसपेशिहरु सुत्छन् सिक्न। साथै, पानी गतिविधिहरु सबैलाई बच्चाहरु को लागि आनन्द ल्याउन।
यो सर्कल को मालिक को समीक्षा धेरै राम्रो छ। आफ्नो बच्चाको लागि यो किनेको गर्नेहरूलाई, प्रयोग र सुरुचिपूर्ण डिजाइन को पानी मा उत्कृष्ट स्थिरता, सजिलो दर्शाउन। लगभग सबै आमाबाबुले तिनीहरूले अब यो एक सर्कल वा सर्कल लहर दुखी मा हुनेछ भनेर डर बिना बच्चा खुला फ्लोट गर्न सक्ने खुसी छन्। बच्चाहरु पनि को संभावना आनन्द निःशुल्क-अस्थायी ठूलो पानी मा आमाबाबुको अर्को। सर्कल Swimtrainer पौडिरहेका दृढ यसलाई पकड र कागज दिँदै छैन गर्दा, बच्चा को कार्य को स्वतन्त्रता सीमित छैन।
प्रकाश र यसको सुविधा र स्थायित्व संग संयुक्त उत्पादन को चमक। मा राख्नु र बन्द गर्न सर्कल पौडी Swimtrainer सजिलो। यसको विशेष फारम धन्यवाद यसलाई बन्द नगरिएको छोराछोरीलाई कुनै पनि उचाई र तौल संग सहज हुनेछ। हामी विभिन्न मोडेल लागि उमेर सीमा मात्र सम्झना पर्दैन।
Swimtrainer वरिपरि संग बच्चा फेला पानी र पौडी पाठ मा सुरक्षित हुन मजा, सजिलो र रमाइलो हुनेछ।
कति पहिलो महिनामा बच्चा सङ्कलन गर्नुपर्छ। वजन को कमी को लागि कारण: डाक्टर को विचार
कारणहरू, डाक्टर सल्लाह: बच्चालाई टाउको मा आफूलाई धड्किन्छ
डिजाइनर बच्चाको ईटा विकास गर्न मद्दत
सीट बेल्ट वा अझै बच्चा कार सीट?
रूस मा गर्मी के छ
गठिया उपचार लोक उपचार
कसरी आफ्नो हात संग औंला रंग बनाउने?
Seborrhea टाउको र यसको उपचार
वनस्पति उद्यान के हो (भोलोग्डा)
रूपमा वाइफाइ-एन्टेना बृद्धि। कसरी वाइफाइ एन्टेना संकेत बलियो बनाउन?
Dzheyms Felps - ब्रिटिश अभिनेता, सबै भन्दा राम्रो Harry Potter फिलिमहरु लागि ज्ञात